Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Norway oo Ku Dhawaaqay Inay Qaxootiga Aan Daganaanshaha Haysanin Dib U Celin Doonto.
Wadanka Norway oo Ku Dhawaaqay Inay Qaxootiga Aan Daganaanshaha Haysanin Dib U Celin Doonto.
Horaantii bishan April, 2016 ayaa Wasiirada Arimaha Soogalootiga wadanka Norwey haweenayda lagu magaacabo Sylvi Listhaug soo rogtay go’aan cusub oo ah in dadka qaxootiga ah ee magangalyada ku joogo dalka Norwey lagala noqon karo sharciga dal-kujooga, dibna loogu celin karo wadankii ay ka yimaadeen.
Hadii ay nabad kadhalato wadankii ay ka yimaadeen, meeshana ay ka baxdo baahidii qofka kuqasabtay inuu wadankiisi uu kasoo qaxo marii hore. Sidoo kale waxay sheegtay inay dowlada Norwey ay rabto in dadkan ay kaqayb qaataan dib u dhiska iyo nabad kusoo dabaalida wadankii ay ka yimaadeen.
Go’aankan cusub ayaa daba socda heshiis ay xisbiyada Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp iyo Venstre ay galeen 19 November, 2015, kuna saabsanaa xiisada ka dhalatay qoxootiga kusoo fatahay yurub sanadkii 2015.
Wasiiradan oo katirsan xisbiga mayalka adag ee FRP ayaa intaas kudartay in sharciga caalamiga ah ee qoxootiga (Geneva convention) iyo sharciga qoxootiga ee Norwey uu ogolyahay in qofka haysta magangaliyo ku meel-gaadh ah lagu celinkaro wadankii uu asal ahaa ka yimid hadii ay nabad ka dhalato. Taasoo micnaheedu yahay in qofkii haystay sharci magangaliyo ku meelgaadh ah (Midlertidig oppholdtillatelse) lagala noqon karo sharciga, loona diidi karo sharciga degenaanshaha abidiyada ah (permanent oppholdtillatelse).
Norwey ayaa noqotay wadankii ugu horeeyay ee katirsan qaarada Yurub ee qaata go’aan noocan oo kale ah. Waxayna dowladu sheegtay in sanadkii 2015 ay Norwey yimaadeen dad qoxooti ah oo tiro ahaan gaadhayo 31.000 00 qof, oo badankooda ka yimid wadanka Suuriya.
Sanadkan 2016 ayaa laga yaabaa in tirada intaas wax badan ka badato. Arintaas oo culays dhaqaale iyo mid dhaqan labadaba keeni karta. Waxayna sheegeen in ay dib u-dajinta iyo howsha dadkan tirada badan ay keeni karto in uu culeys fuulo maamulada magaalooyinka, isla markaana ay buuxin waayaan shaqadii ay uga baahnaayeen dadka deegaanka ah.